प्रधानमन्त्री ओलीको खतरनाक कार्यदिशा ! | नेपाली पब्लिक प्रधानमन्त्री ओलीको खतरनाक कार्यदिशा ! | नेपाली पब्लिक
अष्ट्रेलिया काण्डः पीडित युवतीले दिइन् अष्ट्रेलियाबाटै… यस्ता छन् विषपानकाे प्रकार, लक्षण र… बिहीबार दिनभरका प्रमुख खबरहरू – छुटाउनु… गोप्य क्यामेरा राखेर १६ सय व्यक्तिकाे… नायिका सेक्सी देखिएको भन्दै सरकारले लगायो… प्राचिनकालमा यसरी हुन्थ्यो सेक्स ! ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परे ‘माग्ने बुढा’
नेपाली पब्लिक २०७६, ६ श्रावण सोमबार १३:५७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा कार्यक्रममा ‘अब फेरि २०१७ साल फर्कन सक्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा आसीन देशको कार्यकारी प्रमुख ओलीले यो कुरो झुक्किएर भनेका होइनन्। न त उनले भाङ खाएर नै बोलेका हुन्।
अहिले २०१७ साल फर्कनु त्यति सहज र सरल विषय हैन। त्यसका लागि राष्ट्र प्रमुखले निर्वाचित सरकारलाई निलम्बन गरेर मुलुकको सम्पुर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि मात्र २०१७ साल फर्कन सक्छ। त्यसका लागि पनि धेरै संवैधानिक कठिनाई छन्। २०१७ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार थियो। राजा महेन्द्रले मुलुकको सम्पूर्ण संवैधानिक अधिकार आफ्नो हातमा लिएर सरकार निलम्बन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासहित उनका क्याबिनेटका मन्त्रीहरु र काग्रेसका सबै वरिष्ठ नेतालाई थुनेर महेन्द्रले सरकार निलम्बन गरेका हुन्। निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बन्दी बनाएर बहुदलीय अवस्था नै खारेज गरी महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव गरेका थिए।
पञ्चायती व्यवस्थाका नाममा मुलुकमा ३० वर्षसम्म निरंकुश राजतन्त्रले एकछत्र राज गर्‍यो। नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको त्याग बलिदान र निरन्तर संघर्षबाट नेपालमा कम्युनिष्टहरुलाई समेत लिएर २०४७ सालमा बुहदलीय व्यवस्थाको पुनः स्थापना भयो। बहुदलअन्तर्गत नै २०६३ सालमा संवैधानिक राजतन्त्रको समेत अस्तित्व समाप्त बनाई दलहरुले संविधानसभाबाटै गणतन्त्रको घोषणा गरे। संविधान सभाको निर्वाचन भयो, संविधान बन्यो। अहिले त्यही संविधानअन्तर्गत भएको आम निर्वाचनबाट केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुईतिहाई बहुमतको सरकार बन्यो। २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म नेपालको राजनीतिमा ठूलो आरोह–अवरोह उत्पन्न भयो। पञ्चायत व्यवस्थाको निरंकुश राजतन्त्र ३० वर्ष चलेर त्यसको अन्त्य भयो। यो थियो २०१७ सालको राजनीतिका मूल घटना र त्यसको पटाक्षेप।
अहिले २०४६ सालपछि अहिलेसम्मको गणना गर्दा झण्डै ३० वर्षको अवधि पुग्न लागेको छ। राजतन्त्रजस्तो खतरनाक शक्ति पनि अस्तित्वमा छैन। तर पनि दुई तिहाईको प्रचण्ड बहुमत प्राप्त ‘सरकारका मुखिया’ केपी शर्मा ओलीबाट भने यही बेलामा २०१७ साल दोहोरिन सक्छ भन्ने खतरनाक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीबाट एकाएक यो अभिव्यक्ति पक्कै पनि आएको हैन। विगत केही समयदेखि त्यस्तै कुनै खतरनाक राजनैतिक गतिविधिका निम्ति मुलुकमा जोडघटाउ चलिरहेको आभाष यहाँका बुद्धिजीवीलाई नभएको होइन। २ वर्षअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग साढे २ वर्षमा प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरेका थिए। त्यही सम्झौताको जगमा एमाले र माओवादी पार्टीबीच एकता भएर ओली नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। सम्झौताको अक्षरशः पालना गर्ने हो भने अब चानचुन १३ महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पद पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई स-सम्मान हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
तर प्रधानमन्त्री भएपछि केपी शर्मा ओलीमा उत्पन्न असीमित शक्ति सञ्चयको भोकलाई दृष्टिगत गर्दा उनले सजिलै ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नेछन् भनेर सोच्न सकिने अवस्था छैन। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली मानसिक रुपले समेत तयार देखिँदैनन्। केही महिनापहिले प्रचण्डले ओली र आफू बीचको सम्झौता सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको छटपटी हेर्न लायक देखिन्थ्यो। दुई शिर्ष नेताबीच भएको सम्झौतापछि पार्टीभित्र उत्पन्न हुने द्वन्द्वलाई आफ्नै अधीनमा राख्ने अभियानमा प्रधानमन्त्री ओली देखिन्छन्। यसै प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओली अहिले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिन सकिन्छ कि भन्ने ‘लाइन’मा विचार विमर्श गरिरहेको उनको अभिव्यक्तिले छनक दिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो लाईनप्रति भारतसमेत सकारात्मक देखिएको प्रतीत हुन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय भ्रमण र भारतको आतिथ्य एवं मन्त्रणा यसै कडीको एउटा सुत्र हो भन्ने ठम्याई विद्धत समाजको छ। नेपाली सेनाको माध्यमबाट राष्ट्रपतिलाई खुसी बनाउने काम भारतले यस पहिल्यै शुरु गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओली र भारतको कार्यदिशा राष्ट्रपति भण्डारीलाई कार्यकारी अधिकार सम्पन्न बनाउनेतर्फ नै उन्मुख देखिन्छन्। ‘मर्नु परेपछि खुट्टा तानेर मर्ने’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाउ देखिन्छ।
सम्झौताअनुरुप ओली प्रधानमन्त्रीको आखिरी दिनमा सत्तारुढ दलभित्र गम्भिर मतभेद उत्पन्न हुने र प्रतिबन्धित नेकपा ‘विप्लव’ले वितण्डा मच्चाइरहने अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अस्त्रले अन्ततः राष्ट्रपतिलाई संकटकाल घोषणा गर्न सजिलो हुने ‘डिजाइनर’हरुको सोचाई हो। विप्लवलाई पूर्णरुपले भड्काएर वितण्डा मच्चाउन प्रेरित गरेपछि त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। यही ‘फर्मूला’अन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओलीले २०१७ सालको अस्त्र फालेका हुन्। अन्यथा प्रधानमन्त्रीजस्तो कार्यकारी प्रमुखबाट यस्तो खतरनाक ‘बेमौसमको बाजा’ बज्दैनथ्यो।
ओली र मोदीद्वारा आईसीपीको उद्घाटन
नेकपा अध्यक्षद्वयबिच छलफल सम्पन्न, ४…
बालबालिकाको प्रश्न– प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ
जग्गा लिजमा दिइएको बारे छानविन…
बालुवाटारमा ओली–प्रचण्ड बचि छलफल